Cheap Rotary Drum NPK Onyinye Fatịlaịza Granulator Machine Ndị na-eweta ya na orylọ Ọrụ | YiZheng
Gịnị bụ Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator Machine?
Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ngalaba ụlọ ọrụ fatịlaịza. Mainkpụrụ ọrụ kachasị arụ bụ ịmị mmiri mmiri. Site na mmiri ma ọ bụ uzuoku ụfọdụ, a na-emeghachi fatịlaịza nke ọma na cylinder ka emechara ya mmiri. N'ime oge mmiri ụfọdụ, a na-eji ntụgharị agba nke gbọmgbọm ahụ mee nrụgide extrusion nke ihe n'ime bọọlụ. dum NPK Onyinye fatịlaịza granulation mmepụta akara gụnyere:
Nhazi nke Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator
Enwere ike kewaa igwe n'ime uzo ise:
1) Akụkụ aka: akụkụ ahụ niile nke akụkụ ahụ nke nkwado site na nkwado ahụ, ike ka ukwuu. Ya mere, a na-eji akụkụ etiti wheeled etiti eme ihe na efere carbon, nke a na-agbanye site na ọwa, na site na njikwa njikwa mma na usoro pụrụ iche chọrọ, eruola ebumnuche nke iji igwe ahụ. Na mgbakwunye na nke ka mkpa ka etinyere na shelf nke nlekọta ahụ, n'ihi na iburu n'uche ahụ mpịakọta ya ga-enwe nnukwu esemokwu, m na-akụ osisi pụrụ iche nke na-egbochi mgbochi, ihe ndị na-eguzogide ọgwụ, na-emeziwanye ndụ nke igwe, A na-ejikwa nke ọzọ n'ịgba otu akụkụ anọ nke wiil ahụ na nko nko, mfe ibu na ibudata njem.
2) nnyefe akụkụ: dum granulator mbanye akụkụ bụ magburu onwe ya maka dum ahu nke ọrụ nwere akara a. Nzipu etiti ka nke elu àgwà welded ígwè, na site na nlezianya àgwà chọrọ. Wụnye na nnyefe etiti Na isi moto na reducer ahọrọ ISO mba ngafe ngwaahịa, pụrụ ịdabere na àgwà. Motor draịva pole, V-belt, reducer nnyefe na spindle, nke mere na ahụ na-arụ ọrụ, nke na-akwọ reducer na spindle akụkụ nke ọrụ, ojiji nke naịlọn dee kwụsịrị njikọta adọ aru Nyefee mbanye.
3) Nnukwu ngwongwo: edozi ya n'ahụ, na nnyefe ezé ezé ezé, ihe na-abụghị nke ahụ na-arụ ọrụ ahụ, iji ihe ndị na-eguzogide ọgwụ na-eji nkà na ụzụ eme ihe, nke mere na igwe ahụ dị ogologo ndụ.
4) Roller: edoziri ya n’akuku abuo iji kwado aru dum.
5) Akụkụ akụkụ: dum granulator bụ akụkụ kachasị mkpa nke ahụ, nke a na-eji ezigbo carbon steel plate welded, wuru n'ime eriri roba pụrụ iche ma ọ bụ ihe na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide acid, iji nweta ọnya akpaka, na-apụ , kagbuo ngwa ọdịnala ọdịnala, yana site na njikwa njikwa mma na usoro pụrụ iche chọrọ iji mezuo ebumnuche nke igwe eji.
Njirimara nke Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator
1. The granulate ọnụego bụ ruo 70%, naanị a nnọọ obere ego nke alaghachi, laghachi ngwaahịa urughuru size obere, nwere ike granulated ọzọ.
2. Tinye n'ime ikpo ọkụ uzuoku, melite ihe ọkụ ọkụ, ihe n'ime bọl mgbe mmiri dị ntakịrị, melite arụmọrụ ihicha;
3. na plastik engineering roba maka lining, akụrụngwa adịghị mfe ịrapara, ma rụọ ọrụ na mgbochi mgbochi corrosion;
4. Nnukwu mmepụta, obere ike oriri, ụgwọ mmezi dị ala.
Mara Ihe Banyere NPK Compound Fatịlaịza Rotary Drum Granulation Production Process
Enwere fatịlaịza site na granulation. Fatịlaịza dị na mbara igwe nwere ike inye nri maka ihe ọkụkụ n'ụzọ niile. Usoro a bu iji meputa ihe oriri (dika N, P, K na ihe ndi ozo) choro site na nkpuru, ya na nitrogen, phosphorus, potassium na ihe ndi ozo ndi ozo kwesiri maka ahihia akuku, wee site na itinye ihe ubi n'ime ala. Banye nri na ala. Thekpụrụ nke usoro ahụ gụnyere nitrogen, phosphorus, potassium particles, ammonium sulfate particles, calcium hydrogen phosphate particles and mixed fat fat fat: first, phosphorus fatịlaịza (sayensị maara dị ka "calcium superphosphate") bụ ammoniated; dị iche iche powdery ngwaọrụ na-granulated, Fikiere ma mma na-emepụta okokụre fatịlaịza. Teknụzụ usoro nke onyinye fatịlaịza mmepụta akara nwere ike kere n'ime akụrụngwa mgwa, akụrụngwa inggwakọta, akụrụngwa granulation, urughuru ihicha, urughuru jụrụ, urughuru grading, okokụre ngwaahịa mkpuchi na ikpeazụ ngwaahịa nkwakọ.
Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator Video Gosi
Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator Model Nhọrọ
Nke gara aga: Typedị Ọhụrụ Organic Fatịlaịza Granulator
Osote: Disc Organic & onyinye fatịlaịza Granulator